လွတ်လပ်ခြင်း | Layma's World
« ပြန်လာပါပြီ စလုံးရေစ … စွပ်ပြုတ် »
မောင်မျိုး, on October 3, 2008 at 9:34 pm said:
လိုတိုး ပိုလျှော့ 🙂 အဲ့လိုစကားကြားဖူးတယ် နည်းနည်းတော့ ပွားခဲ့လိုက်အုံးမယ် ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးက ကြိုးဆွဲနေကြတဲ့သူတွေပေါ့ သူနိုင် ကိုယ်နိုင်ဆွဲနေရင်တော့ တစ်နေ့ ဒီကြိုပြတ်မှာပဲ …အဲ့ဒီတော့ကားး မာနတွေ အတ္တတွေကို နည်းနည်းလေးလျှော့လိုက် ဟော့ပြီးတော့ အားပြတ်သွားသလိုနဲ့လွှတ်ချလိုက်ပြီး တစ်ခါတည်း ကောင်လေးရင်ခွင်ထဲပြေးဝင်လိုက်ပေါ့ အဲ့လိုဆို ပွဲစဉ်ကတော်တော် လှသွားပြီး ကိုးရီးယား ကားတွေမှာဆို ဒါမျိုးတွေကြီးပဲ ပေါက်တယ်ဟုတ် တူမကြီးး 😛
THS, on October 3, 2008 at 11:21 pm said:
အလျှော့အတင်းလေးရှိမှနော်၊ စွန်လေးနေရာကနေ ခံစားကြည့်တော့လဲ စွန်လေးကို သနားမိတယ် 😦
ShwunMi_ရွှန်းမီ, on October 4, 2008 at 3:43 am said:
စွန်တစ်လက်ဟာ ငှက်တစ်ကောင် မဟုတ်တော့ . . . လေနှင်ရာ ကြိုးဆွဲရာပဲပေါ့ ..။
စွန်လေးရဲ့  ရစ်ဘီးကိုင်တဲ့သူ သဘောကောင်းပါစေ =)
မိ, on October 4, 2008 at 1:21 pm said:
လူဆိုတာ ကိုယ့်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝမှာ ကျေနပ်တယ်ဆိုတာ ခပ်ရှားရှားပဲ
ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် စွန်လေးက ကြိုးမလျော့မတင်းလေးနဲ့
နင်ရှေ့မှာ လမ်းဖောက်ပြီသားရှိတယ် တယ်ရင်းလေး
ညစ်စရာရှိရင် ထွက်ပေါက်တခုတော့ ရှာပေါ့ တယ်ရင်းလေးရယ်
ထွက်ပေါက်မပေးရင် နင်မောနေမှာပေါ့ လူ + စိတ်
ဘယ်ပြသနာမဆို အဖြေဆိုတာရှိစမြဲပဲလေ နင်ပြေါနေကြအတိုင်းပေါ့
ပျော်ပျော်သာနေပါဟာ မကျေနပ်တာရှိရင် နင့်အိမ်က
ချားကိုးကိုပိတ်ဟောက်လိုက် အဟီး ပြီးရင်နာ့ဦးလေးနဲ့ပြ
နင့်ကိုချစ်တဲ့နာရှိတေးတယ်ဆိုတာလည်း မမေ့နဲ့ (ပိုက်ဆံချေးမလို့ အင်ထရိုဝင်တာ)
ပျော်ရွှင်ပါစေဟာ ပျော်ရွှင်မှုတွေ တလုံးတထွေးကြီးနင့်ဆီ ရောက်လာပါစေဟာ..
ဝေလေး, on October 4, 2008 at 3:53 pm said:
စွန်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝမှာ ရစ်ဘီးကိုင်တဲ့လူ အလိုကျလိုက်နေရမှာလား…
မမရေ ဝေလေးလဲ စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်သေးဘူး…. ခက်တယ် ခက်တယ် ဟီးး 😛
MhawSayar, on October 4, 2008 at 5:11 pm said:
ဘာများလဲလို့ဗျာ.. အလန့်တကြားတောင် ဖြစ်မိပါ့ အစ်မရာ.. 🙂 ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်မညစ်ပါနဲ့ဗျာ.
sin dan lar, on October 4, 2008 at 5:45 pm said:
layma, on October 4, 2008 at 11:52 pm said:
>မောင်မျိုး… ဒါရိုက်တာလုပ်ချင်လို့ လား..။ ဟား..ဟား…။
>ဘိုတင့် … အင်း … သက်မဲ့တွေကို သနားတတ်လာရင် မလေးမလို ရူးကြောင်ကြောင် ဖြစ်လာလိမ့်မယ်..။
>မီ … ဟုတ်တာပေါ့ ..လေနှင်ရာ … ကြိုးဆွဲရာပေါ့ …။
>မိ … တယ်ရင်း… ကွန်မန့်အရှည်ကြီးရေးပြီး ငါ့ကိုအားပေးသွားတယ် … ။ ငါ ညစ်လို့ ရေးတာ မဟုတ်ပါ ..။ ညစ်စရာလည်းမရှိပါ …။ စွန်တွေကိုကြည့်ပြီး အတွေးချဲ့ ကြည့်တာပါ …။ ခစ်..ခစ်…။ နင်လည်း ပျော်ပါစေ …။
>ဝေလေး … ပုထုဇဉ်တွေဆိုတော့ ဒီလိုပဲ ထိန်းဖို့ ခက်တယ် …။
>မှော်ဆရာ … ဘယ်လိုများတွေးလိုက်မိသလဲ မှော်ဆရာ …အလန့်တကြားတောင်ဖြစ်မိပါရဲ့ … အစ်မ မညစ်ပါဘူး မှော်ဆရာရဲ့..။
> Sin dan lar… ဟုတ်… မသိမှာစိုးလို့မှတ်ချက်ရေးထားရတာ…။
MelodyMaung, on October 5, 2008 at 12:53 am said:
မှတ်ချက်ဖတ်ပြီးမှ သိသွားတာ အဲဂလိုကိုး
SoeMoe, on October 5, 2008 at 8:38 am said:
mtj, on October 5, 2008 at 10:52 am said:
တယ်ခက်တဲ့လူတွေ ဘလော့ဂ်ကို ဘလော့ဂ်လို မဖတ်ကြဘူး ဟား ဟား 😀 (ဆရာကြီး စတိုင်လ်ဖြင့်ပြောသည်)
ခေးရော့စ်, on October 5, 2008 at 11:52 am said:
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးအသားက ထိတော့ ခံစားသွားတယ်။ စွန်နေရာကရော၊ ကြိုးနေရာကရော၊ ကောင်းကင်ထဲက လေလှိုင်းလေးတွေ နေရာကရော။ အဟီး
ပန်ဒိုရာ, on October 5, 2008 at 3:19 pm said:
ထင်တယ် တခုခုကို ရေးမှန်းတော့..။ စွန်ဖြစ်မှတော့ စွန်အလုပ်ကိုတော့ လုပ်ရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလား လေးမရယ်။
BLACK DREAM, on October 6, 2008 at 3:45 am said:
ဘိုတင့်ကြီးပြောလို့ ပြေးလာဖတ်တာ အစ်မရေ…။ တစ်ကယ်ကောင်းတယ်ဗျာ…။ ဇာတ်လုံးတစ်ခုလုံးကို မြုပ်ပြီးရေးသွားတာ…။
လွမ်းလုင်, on October 6, 2008 at 6:30 am said:
တကယ်ကို ကောင်းတဲ့ အရေးအသားပါပဲအစ်မရေ… လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတဲ့ သဘောတရားမှာ သတိတရားနဲ့ အသိတရားက စွန်ကြိုးလို ထိန်းနေမှ အဆင်ပြေမယ်ဗျ… အဟတ်ဟတ်… ဆရာကြီးလေသံ ပေါက်သွားပြီထင်တယ်… ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်ပြန်ပြောတာပါဗျာ… အသိတရားနဲ့ သတိတရားလွတ်နေတာ ကြာနေပြီ… ကျေးဇူးပဲအစ်မရေ… အတွေးတစ်ခု အမြင်တစ်ခု ရသွားပြီ…။
ညိမ်းညို, on October 6, 2008 at 4:04 pm said:
မမယ်လိုဒီလို ဟိုတွေးဒီတွေး တွေးလိုက်မိသေးတာ ၀န်ခံပါကြောင်း
ကိုကြီးမှော်လို အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွားမိသေးကြောင်း
အဟီး နောက်ဆုံး ကိုသင်္ကြန်ကြီးမှတ်ချက်ပြုသလို တယ်ခက်တဲ့လူတွေထဲ ပါမသွားအောင် အသာကိုယ်ရှိန်သတ်၊ ဘလော့ကို ဘလော့လိုဖတ်သွားပါကြောင်း 🙂
အစ်မလေးမရေ နားလည်မှုရစ်ဘီးလေးနဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးတစ်ချောင်း မပြောင်းမလဲရှိနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အဆင်ပြေနိုင်ကောင်းပါရဲ့ဗျား 🙂
tzm, on October 6, 2008 at 5:04 pm said:
ဖတ်နေတုန်းမှာ စွန်တကောင် အကြောင်းဆိုတာကို လုံးဝကို မထင်မိဘူး။
မှတ်ချက်တွေ့တော့မှ….. အင်း ဒါလည်း ဟုတ်ပါလား ဆိုပြီး ဖြစ်သွားတယ်။ 😀
winkabar, on October 9, 2008 at 8:35 am said:
ဟုတ်တယ်နော် အစ်မ ဖတ်ရင်းနဲ့ စဉ်းစားကြည့်နေမိတာ။ ကိုယ်သာ အဲနေရာမှာဆို ဘယ်လိုနေမလဲလို့လေ။ သမီးသာဆိုလည်း နေတတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ အကျင့်ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူးနော်။
lay-ma, on October 10, 2008 at 3:35 pm said:
>မ.. မောင်… ဟဲ..ဟဲ.. ဂလို တွေးမိအောင်ကို ကြံစည်ရေးသားထားတာလေ…။ အဲဂလို.. အဲဂလို…။
>စိုးမိုးလေး… မမခေါင်းဆောင့်သွားပြီ… မြောက်သွားတာ..။
>ကိုအတာ… ဆရာကြီးကလည်း… ဆရာကြီးက သင်ပေးလိုက်ပေါ့…။
>ကြေးအိုး… ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ကြေးအိုးလေး မောသွားမယ်ဆိုတာ ယုံပါတယ်..။
>မပန်… စွန်အလုပ်စွန်လုပ်ရင်း စွန်က အတွ န့် တက်ချင်နေသတဲ့…။
>အနက်ကြီး… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။ ဒါနဲ့… ဘိုတင့် ဘော်ဒါဆိုတော့ ဘိုနက်လို့ခေါ်ရင် ကောင်းမလား…။
>လွမ်းလုင်… စိတ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့မြဲမြဲ တွဲထားနော်…။ အစ်မလည်း မနည်း စွဲကပ်နေရတယ်..။
>ဘိုညိမ်း … ရစ်ဘီးအထိန်းကောင်းတဲ့.. စွန်သမားကောင်းတစ်ယောက်လားမသိဘူး…နော်…။
>ကိုသန့်.. မမလေးရဲ့ စာမျက်နှာမှာ အရင်လို ပြန်တွေ့ ရပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် အရမ်းဝမ်းသာတယ်…။ အရင်လို ကိုသန့် ကို ( တက်)ဂျောက်ချလို့ ရောရပြီလား… ။
>၀င်္ကပါ… သိပ်ဟုတ်တာ ပေါ့ ညီမလေးရယ်…။ နေတတ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး..။
nu-san, on October 19, 2008 at 12:16 am said:
လေးမရေ.. စာဖတ်ရင်းလူကို မျောပါသွားတာပဲ… အစတုန်းကတော့ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးအကြောင်းပဲ ရေးထားတယ်ထင်တာ.. နောက်ဆုံးမှ.. ဒါပေမယ့် အပိတ်လေးက အရမ်းမိုက်တယ်.. 🙂
လေးမရယ်.. “အသိ” ရှိပြီဆိုမှတော့ လိုက်လုပ်နိုင်မှာပါ။ အရင်ဆုံးက “အသိ” ရှိဖို့ပဲ မဟုတ်လား.. ပြောမယ့်သာ ပြောတာပါ.. အမလည်း စိတ်က ခပ်မြန်မြန်.. ပြင်ရဦးမယ်.. 🙂
ဒီဝိုင်း, on October 19, 2008 at 6:47 pm said:
မင်းကျန်စစ်, on October 26, 2008 at 11:02 am said:
လွတ်လပ်မှုတိုင်းမှာ ကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ အမရေ။း)
lay-ma, on October 26, 2008 at 7:13 pm said:
>မနုစံ … ဝေး… အောင်ပြီကွ… အောင်ပြီ… ။ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေး လို့ထင်ရအောင်ရေးထားတာ.. ဟိ…ဟိ…။ အစ်မရေ… စိတ်မြန်တာ ချင်းတူတယ်လား..။အဖော်ရပြီ…။
>ကိုဒီဝိုင်း… ကယ်မယ့်သူက ရှိပြီးသား…။
>ကျန်စစ် … ဒါပေါ့… ဒါပေါ့.. အရမ်းလွတ်လပ်တော့လဲ ယောင်ချာချာ ဖြစ်တတ်တာပေါ့…။